Top 5 Apps inuu kaa caawiyo inaad akhriso Message Text Gacan-Free
Qabashada telefoonka, gaar ahaan akhriska fariimaha qoraalka ah ama ka jawaabaya iyaga marka aad gaadhiga waddo waa mid ka mid ah sababaha aasaasiga ah ee badan ee kediska ee wadada dunida oo dhan. Sidaa awgeed, waxa aan soo waa la yaab in booliska ee dalal badan oo ay u arrinkaas ku saabsan isticmaalka telefoonada marka aad gaadhiga waddo. Wax walba oo aad telefoonka runtii waa jeedinaaya, waxa ay noqon aad navigation, ciyaaryahanka music, isagoo wada hadalka ama qoraalka. Dad badan ayaa ku weydiin doona sida loo akhriyo fariimaha qoraalka ah ama waxaa jira wax Chine in ay akhriyaan farriimaha qoraalka ka soo baxay? Hal si oo la baabi'iyo qaar ka mid ah jeediya waa in aad telefoonka fariimaha qoraalka akhriyi aad ugaga.
Ka dib markii qaar ka mid ah barnaamijyadooda ah kuwaas oo kaa caawin in ay akhriyaan farriimaha qoraalka aad ugaga.
5. vBoxHandsFree fariimaha
Si aan ku bilaabo isticmaalaya ReadItToMe, download app ka Play Google Store. Marka lagu rakibay iyo bilaabay, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad dooneysid inaad barato inaad isticmaasho ReadItToMe ama kaliya garabka u. Markii ay soo maraan tutorial qaado. Runtii sharxayaa waxyaabaha aasaasiga ah oo aad ka arki kartaa sida u fududahay in la isticmaalo iyo waxa sidaas samayn kara adiga.
Qaababka ugu muhiimsan ee ReadItToMe:
• Akhri SMS soo socda.
• Akhri magaca wacaya soo socda.
• Akhri farriimaha soo socda ka mid ah barnaamijyadooda kale sida tagi ama WhatsApp.
• U dir reply codkaaga SMS, Whatsapp, Facebook Rasuulkiisa, telegraam, Gmail iyo Line ah.
• Had iyo jeer akhri.
• Akhri oo kaliya markii qalab gaar ah Bluetooth xiran yahay.
• kaliya akhri marka headphones ku xiran yihiin.
• Translate text hadlaan ka hor akhriyo sida 'LOL' loo tarjumi lahaa in << u qososhay si cod dheer >>.
• Waxaad u qeexi karaan turjumaadaha kuu gaar ah oo ka mid ah erayo gaar ah.
• akhri karaa inaad SMS ka badan music la ciyaaray (mugga music la diiday, ka dibna dib u dib u, si toos ah).
• Icon in bar ogeysiis si ay u muujiyaan marka ay ON iyo orodka waa.
• Si buuxda u customizable.
Taageeridda Operating Systems:
p ReadItToMe waxaa loogu talagalay oo kaliya Android Operating System iyo qalabka ay ka soo jeedaan in ay taageeraan.
• Reads soo baxay dhamaan magacyada wacaya ka.
• Aad u fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo.
• Reads fariimaha xitaa marka music yahay.
• Hawlaha kaliya marka qalab Bluetooth ama headphone yahay.
• Dhibaatooyinka in qaar ka mid ah fursadaha goobta, tusaale ahaan, xitaa haddii aad weydiiso magac in la ogaanin, weli waxaa lagu ogaadaa.
DriveSafe.ly waa app wadida asalka ammaan ee Android iyo Blackberry! Tan iyo 2009, DriveSafe.ly ayaa app Premier wadida ammaan ee adduunka ee, balaayiin iyo balaayiin fariimaha qoraalka (SMS) iyo fariimo email aad ugaga hadlayay.
Qaababka ugu muhiimsan ee DriveSafe.ly:
DriveSafe.ly qoreysa Mid ka mid ah howlgalka tuubada, oo ah auto-ku shaqeynayaan in kuu ogolaanayaa inaad muuqan ula falgalaan telefoonka marka aad gaadhiga waddo, in uu yahay, iyada oo aan SMS ama email halka aad gaadhiga wado.
Waxaad sidaas oo kale isku dari kartaa DriveSafe.ly leh qaabka Bluetooth aad gaariga ayaa si awgeed waxaa ku noqon sida ugu dhakhsaha badan marka aad soo gashid aad gaariga.
DriveSafe.ly sidoo kale taageertaa 28 luqadood text-ka-hadalka iyo taageerada waayo, xataa codad caan ah.
DriveSafe.ly ayaa haatan diyaar u ah labada Android iyo Blackberry.
• app akhrinta farriimo qoraal si buuxda u customizable oo kuu ogolaanaya inaad si ay doortaan kaliya fursadaha in aad rabto in aad isticmaasho.
• DriveSafe.ly akhriyo qoraalka (SMS) farriimaha iyo emails aad ugaga in waqtiga dhabta ah iyo si toos ah jawaab (auto-Waxqabte) aan darawallada u baahan doonaa in uu taabto ay Android ama qalab BlackBerry.
• app ma taageerin mid kamid ah hawlaha Google Voice.
• Waxay bixisaa Times aad u qaali ah.
Text'nDrive waa codsi si xor ah bixi karo ee aaladaha Apple iPhone in akhriyi doonaa fariimo ah in aad marka aad gaadhiga waddo. Barnaamijkan wuxuu ku haboon u fasaxaya gaar ahaan wadayaasha ah inuu sii joogo ka mid ah khataraha la imanaysa marka la isticmaalayo telefoonada ay marka ay baabuur-wadidda. Gacmaha Simple in ay isticmaalaan iyo gebi ahaanba bilaash ah, Text'nDrive akhriyi doonaa farriimo aad isa soo taraysa. Si aad u midoobaan la mailkooda emailkaaga, kaliya aad u leeyihiin in la furo codsiga. Waxaa intaasi dheer oo wanaagsan si ay u tagaan oo si fiican u shaqeeyo bixiyaha kasta mobile, in aan la iloobin oo dhan gacmaha qalabka lacag la'aan ah iyo sidoo kale, tusaale ahaan, kordhiyo aad qalab, headset Bluetooth iyo qorshe isku dubaridan oo aad gaariga.
Qaababka ugu muhiimsan ee Text'nDrive:
• Dhegayso farriimo email iyo jawaab codkaaga.
• Akhri emails ka ugu bixiyayaasha internetka.
• Si fudud si loo soo dajiyo iyo in ay isticmaalaan.
• la socon kara oo dhan sidayaal mobile.
• shaqeeyaa kasta oo qalabka gacan-ku oo bilaash ah.
Text'nDrive waa la jaan qaada macruufka, Android iyo Blackberry OS.
• Ka dhig waddooyinka ammaan ka hortagga wadida wareeraa.
• makiinada No loo baahan yahay, oo kaliya hadal oo u qabtaa inta ka dhiman aad u!
• isku daydaa inay wacyigelin ah khatarta qoraalka marka aad gaadhiga waddo.
• Kuu ogolaanayaa rakaabka in uu sii joogo wax soo saar leh, halka joogtid diiradda saaray wadida.
• hakin aan hoos u qaab aad telefoonka ee ugu dhan.
• waa fursad aad qaali u ah.
• qaadataa waqti aad u dheer in ay helaan emails cusub ka xisaab-mail in aad isticmaasho, sida xisaabta Gmail ah.
• version ayaa bixisay ma taageeri reading SMS ama shaqeynta u jawaabno.
Nissan ayaa jawaabo badan oo amaana oo Fariin marka aad gaadhiga waddo. Its Gacan-Free Text Fariin Kaaliyaha idiin siinayo fursad ay ku maamulaan dirau isticmaalka Yeedhidda cod fudud, si aad u soo baxay oo ku saabsan hayn karaa indhahaaga oo weli ay awoodaan in ay ka jawaabaan sida loogu baahan yahay. Habkaani waa goosin ka mid ah NissanConnect, taas oo lacag la'aan ah muddo 3 sano ah iyo in ka dib, qiimihiisu yahay $ 20 sannad kasta.
Qaababka ugu muhiimsan ee NissanConnect:
• wacaya degdegga ah.
• Ogeysiinta Automatic marka gawaari.
Systems Operating taageerayaan:
Taageerada smartphone kasta oo la isku xirnaanta Bluetooth.
• interface user Aad is-dhexgal.
• A aad u duufsan bandhigay.
• Aad u qaali ah.
• Waxa kaliya ka qaadan kartaa fariin caadadii in uu isticmaalaa horay u soo diray fariimo ah.
5) vBoxHandsFree fariimaha
Waa codsiga macruufka ah taas oo la jaan qaada iPhone 3GS ah / 4, iPad iyo iPod Touch ka. Waxaad dhegaysan kartaa fariimaha aad marka aad gaadhiga waddo oo markaas jawaabaan amarrada cod si fudud iyagoo ka hadlaya. App kuweeda aad qoraal in hadalka iyo qeybsanaan ku xigeenka ee u gaar ah.
Qaababka ugu muhiimsan ee vBoxHandsFree Fariin:
• Reads emails aad ugaga oo aan xataa taabashada telefoonka.
• Jawaabta ka hadli gashiga sida "bood Waxaa" ama "Send".
• Waxay la shaqeyaan wixii qalab gacan-ku oo bilaash ah.
app vBoxHandsFree fariimaha waa kuwo la socon kara qalab macruufka ah. Si kastaba ha ahaatee, nooca ugu dambeeya waa Android socon sidoo kale ..
• ogaanshaha account email Automatic.
• shaqeeyaa Yahoo, Gmail, Hotmail, AOL oo inta badan kale bixiyayaasha email.
• naafada nidaamka cod-to-text markii gaari la joojiyo.
• Ma mid ka mid ah fursadaha qaalisan suuqa maanta.
Top 10 Shabakadaha Internetka iyo Apps u soo dirto fariin qoraal ah si qarsoodi ah
Top 10 Beatles Warsame Qaasaali
> Resource > Top List > Top 5 Apps in caawi Message Text Gacan-Free Waxaad Akhri